Ra’iisul wasaare Cumar C/rashiid oo olole xoogan ka wada magaalada Muqdisho (SAWIRO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Ra’iisul wasaare Cumar C/rashiid oo olole xoogan ka wada magaalada Muqdisho (SAWIRO)
Ra’iisul wasaaraha xukuumada federaalka Soomaaliya Cumar C/rashiid Cali Sharmaarke ayaa maalintii shalay magaalada Muqdisho kulan kula yeeshay xildhibaanada labada Aqal ee baarlamaanka Soomaaliya, kuwaas oo dhawaan lagu soo doortay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka J/hoose.
Ra’iisul wasaare Cumar C/rashiid oo haatan wada olole xoogan uu ku kasbanaayo codka xildhibaanada labada Aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa xildhibaanada labada Aqal ka codsaday inay codkooda siiyaan, islamarkaana ay u doortaan xilka madaxtinimada Soomaaliya.
Qaar ka mid ah xildhibaanadii uu kulanka la qaatay ra’iisul wasaare Cumar C/rashiid ayaa sheegay inay soo dhaweeynayaan islamarkaana taageerayaan ra’iisul wasaaraha damaciisa ku aadan inuu madaxweyne noqdo, waxayna ugu laab-qaboojiyeen inay taageerayaan, ayna codkooda isaga siinayaan.
Dhinaca kale, ra’iisul wasaare Cumar C/rashiid ayaa sidoo kale dhawaan la kulmay xildhibaanada labada Aqal ee lagu soo doortay magaalada Garoowe xarunta maamulka Puntland, kadibne ka codsaday in codkooda isaga siiyaan, waxa uu sidoo kale Cumar kulamo hoose la qaatay xildhibaano kale oo katirsan labada Aqal laguna soo doortay goobo kala duwan ee dalka.
Si kastaba ha ahaatee, ra’iisul wasaare Cumar C/rashiid Cali Sharmaarke ayaa haatan ka mid ah musharaxiinta u tartameeysa xilka madaxweynaha cusub ee Soomaaliya, oo ay doorashadeedu dhawaan dhici doonta, waxaana doorashadaan sidoo kale ka qeyb-gali doonna musharixiin badan oo ku haminaya inay xilka ku guuleystaan.